Dagaal u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed oo ka socda magaalada Beledweyn – STAR FM SOMALIA
Iska hor imaad u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed ayaa ka socda xaafada howl-wadaag ee galbeedka magaalada Beledweyn, iyadoo dagaalka la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalkan ayaa hakad geliyay dhaq dhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka, waxaana dadka deegaanka ay soo sheegayaan in rasaasta la is weydaarsanayo ay gaareyso xaafadaha kale ee magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka uu sababay dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn, waxaana uu dagaalka ku bilowday si lama filaan ah.
Ciidamada Milateriga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa dadaal ugu jira sidii ay u kala dhex geli lahaayeen labada maleeshiyo beeleed ee isku hor imaadka ku dhex maraya galbeedka magaalada Beledweyn.
Ma jirto ilaa iyo hada wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Beledweyn iyo kan Gobolka Hiiraan oo ku aadan iska hor imaadka.